शेयर बजारमा सामान्य सुधार, आज कसले कति कमाए ? कति गुमाए ? - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
शेयर बजारमा सामान्य सुधार, आज कसले कति कमाए ? कति गुमाए ?
काठमाडौँ / बुधबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कको सुधार देखिएको छ । मंगलबार उच्च अङ्कको गिरावट आएको बजारमा बुधबार भने १.८९ अङ्कको बृद्धि देखिएको हो ।
नेप्से परिसूचकमा हरियो पोतिए पनि यो दिन सेन्सेटिभ परिसूचक भने ०.२९ अङ्कले घटेर ५१५.१९ बिन्दुमा झरेको छ ।
नेप्सेसँगै आज कारोबार रकममा पनि सामान्य बृद्धि देखिएको छ । बुधबार धितोपत्र बजारमा ४ अर्ब २१ करोड ७४ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन मंगलबार भने ४ अर्ब १६ करोड ५८ लाख ९६ हजार ५७७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
यो दिन २२७ ओटा कम्पनीको शेयर ५४ हजार ७०३ पटकमा ७४ करोड ४५ लाख २२७ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएका हुन् ।
बुधबार जीवन बीमा र बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक ०.३९ प्रतिशतले घटेको छ भने व्यापारिक समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी १.२८ प्रतिशतले घटेको छ । बाँकी सबै समूहको परिसूचक बृद्धि भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
यसदिन सर्वाधिक बढी वित्त समूहको परिसूचक १.३१ प्रतिशतले बढेको छ भने हाइड्रो पावरको ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकको ०.७७ प्रतिशत र लगानी समुहको ०.६४ प्रतिशतले बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा झिनो सुधार देखिएको छ ।
बुधबार मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको शेयरमूल्य ९.४७ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य ५६५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य ६.६५ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य ४६५ कायम भएको छ भने पञ्चकन्या माई हाइड्रोपवारको शेयर मूल्य पनि ६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यता गोर्खाज फाइनान्सका लगानीकर्ताहरुले सवैभन्दा बढी २.५५ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
सो कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२ रुपैयाँले घटेर अन्तिम मूल्य ८४२ रुपैयाँ कायम भएको हो । त्यस्तै, उन्नती सहकार्य लघुवित्तको शेयरमूल्य पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा २.२३ प्रतिशतले घटेको छ भने तेह्रथुम पावर कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले पनि २.२१ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
बुधबारको कारोबार रकममा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको हिस्सा सर्वाधिक बढी रहेको छ । उक्त कम्पनीको आजको शेयर कारोबार रकम २६ करोड १५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने आइसिएपफसी फाइनान्सको १८ करोड ६७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
नेप्से दोहोरो अंकले बढ्यो तर कारोबार रकम ९७ कराडमै सीमित, हाइड्रोको बजारमा फर्कियो उत्साह
शेयर बजारमा हरियाली : नेप्से १५८३.६१ बिन्दुमा उक्लियो, १ अर्ब २७ करोडबढीको कारोबार
सामान्य अंकले घटेको बजारमा २ अर्ब ४५ करोडमाथिको कारोबार, प्राइम बैंकको कारोबार रकम सबैभन्दा बढी
नेप्से परिसूचकमा २.३९ अंकको गिरावट, कारोबार एक अर्ब ७५ करोडमै सीमित
नेप्से परिसूचक ४.५५ अंकले घट्दा २ अर्ब ८४ करोडमाथिको कारोबार, यी हुन् १० करोडमाथि कारोबार गर्ने पाँच कम्पनी
मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्ने, बोनस र नगद लाभांश कति ?
नेप्से परिसूचक ३२ अङ्कले उकालो लाग्यो, कुन कम्पनीको कति कारोबार ?
हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनिले लाभांश दिदै, बोनश शेयर कति ?
एनआईबिएल एस क्यापिटलको विद्युतीय प्रणालीबाट इकाईहरू बिक्री गर्न सकिने
लाभांश पारित गर्न रिलायन्स लाइफले बोलायो साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
सेयर बजारमा भारी गिरावट, बजार घट्ने क्रम किन रोकिएन ?